Terraforming: waa maxay, sifooyinka iyo meerayaasha terraform | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 30/04/2021 09:25 | Ciencia
Waxaan ognahay in bini aadamku xaalufinaayo kheyraadka dabiiciga ah ee dhulkeena si aad u baaxad weyn isla markaana baaba'a noocyadeenna la soo saaray dhowr jeer sababo la xiriira burburka dhulkeena. Sababtaas awgeed, waxaa jira hadal ka mid ah qaabaynta. Waxay ku saabsan tahay la qabsiga meerayaasha kale xaaladaha ku habboon ee aadanaha lagu noolaan karo. Asalka terraforming wuxuu ka dhacay mala awaalka sayniska, laakiin waxaa ku mahadsan horumarka sayniska, bulshada cilmiga ku jirta oo ka socota.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa waxa ay yihiin tillaabooyinka terraforming iyo meerayaasha shuruud looga dhigi karo inay ku noolaadaan.
2 Meerayaasha kale ee terraform
4 Ku noolow marsada
Xaqiiqda ka hadalka terraforming-ka ayaa lagu soo koobay raadinta meeraha iyo hagaajinta jawigeeda si ay ugu noolaato aadanaha. Mar uun meere ayaa la carraabiyey waxaad ka hadli kartaa degaanada suurtagalka ah ee dadku isticmaali karaan. Muhiim ma aha oo kaliya in la ogaado lana waafajiyo jawiga jawi lagu noolaan karo, laakiin sidoo kale muhiim ma ahan qaab dhismeedka juqraafiyeed iyo qaab dhismeed si looga dhigo kuwa ugu eg meeraheenna. Mid ka mid ah kiisaska ugu caansan ee cilmiga bulshada iyo bulshada guudba waa Mars.
Waxaa jira qoraayo caan ah oo badan oo soo jeediyay in Mars loo rogo adduun ku habboon nolosha aadanaha. Waxa kale oo jira meerayaal kale oo la terraform karo oo la jaanqaadi kara xaaladaha qofka aadamaha ah. Terraforming waa tallaabo muhiim u ah xagga horumarka iyo badbaadada aadamaha oo ah nooc. Aan aragno waa kuwee meerayaasha la gumaysan karo. Waxa macquulka ah in la sameeyo ayaa ah in laga bilaabo meerayaashaas nidaamka qorraxda ee ugu dhow dhulka. In kasta oo Venus ay tahay meeraha ugu dhow, haddana heerka cadaadiska hawadeedu aad buu u sarreeyaa oo waxay leedahay daruuro urursan sulfuric acid iyo heerkul sarreeya. Tani waxay ka dhigeysaa caqabadda ku noolaanshaha Venus mid aad u sareysa.
Si ka fudud oo dabiici ah waxay noqon laheyd in laga bilaabo Mars.
Meerayaasha kale ee terraform
Ragga gaaska ee nidaamka qoraxda ku jira waa Jupiter, Uranus, Saturn iyo Neptune. Waxay haystaan ​​dhibaatada muuqata oo ah inaysan haysan dusha sare oo ay ku fariistaan ​​marka laga reebo xudunta. Tani waxay ka dhigeysaa iyaga meerayaal aan xitaa looga fikireynin terraforming.
Meerayaasha badweynta ee ku dhowaad ka kooban hal badweyn ama aad ugu soo noqnoqda goobaha khayaaliga sayniska. Filimka Interstellar ama sheekada Solaris waxaad ku arki kartaa sida meerahu u yahay carro dhul ah oo aan loo gumaysan karin. Tan waxaa lagu hagaajin karaa qaab fudud oo ka duwan kiiska meerayaasha gaaska leh, laakiin wali waxay noqon laheyd qaali sare. Si kastaba ha noqotee, meerayaashani waa kuwo aan degganeyn marka laga eego dhinaca cimilada maaddaama aysan lahayn qolof dhulka ka soo baxday oo aysan jirin wareegyo silikayt ah iyo kaarbooyin.
Uumiga badda uumi baxeedu wuu xadidan yahay iyo kaarboon laba ogsaydhka waxaa si wax ku ool ah looga saaraa badweynta lafteeda laakiin ma sii daayo lithosphere. Tani waxay ku keentaa meeraha inuu ku qaboojiyo xawaare aad u weyn isla markaana galo da 'baraf ah iyo marxaladda dambe oo leh qorrax ifaysa uumi baxa ayaa si aad ah kor ugu kici doona si uu markale u sameeyo uumiga biyaha oo uu u dhalaaliyo barafka. Meerayaasha Oceanic waa kuwo aad u deggan oo gebi ahaanba su'aal kama taagna hannaanka terraforming.
Sababta aan kor ku soo sheegnay darteed, mid ka mid ah meerayaasha lala bartilmaameedsaday in bini-aadamku dhul-weynaha ka dhigo waa meeraha Mars. Maalmahan Waxaa jira laba mashruuc oo aad u culus safarka Mars, in kasta oo aan loo baahnayn terraforming. Tani waxay muujineysaa in meeraha uu sii wado kicinta xiisaha weyn ee aadanaha. Meerahan sida Earth ama Venus waxay leeyihiin taariikh juqraafiyeed. Mid ka mid ah faahfaahinta ugu muhiimsan ayaa ah haddii ay biyo jiri lahaayeen waagii hore iyo inta ay le'eg yihiin. Waa dhinac markasta oo aad loo qanciyo u dhowaa inuu ahaa iyo in baddu u timid inay qabsato ku dhowaad saddex meelood meel dusha.
Waqtigan xaadirka ah waa meel si cad looga faa'iideysan karin maadaama jawigeeda khafiifka ahi ka dhigayo inuu leeyahay kumannaan kun ka mid ah cadaadiska cimilada ee ka jira meeraheenna. Mid ka mid ah sababaha jiritaanka jawiga dhuuban ee noocaas ah waxaa ugu wacan a qiimayaasha culeyska daciifka ah ee gaaraya 40% wax ka yar dhulka iyo dhinaca kale maqnaanshaha magnetosphere. Waa in lagu xisaabtamo in magnetosphere-ka uu yahay midka ka dhigaya qaybaha qoraxda dabaysha qorraxda inay noqdaan kuwo aan la leexin oo saameyn ku yeelan kara jawiga. Waan ognahay in walxahaasi si tartiib tartiib ah u burburin karaan jawiga.
Meeraha aan aragno ma leh magnetosphere wuxuuna leeyahay jawi cufan maadama xooggiisa cuf isjiidashada uu aad uga weyn yahay. Heerkulka badda wax badan buu is bedbeddelayaa wuxuuna gaari karaa qiimayaasha boqollaal darajo oo ka hooseeya eber illaa 30 digrii meelaha u dhigma. Dabayluhu badanaa ma xoog badna oo duufaannada boodhku waxay ku dhacaan xoogaa jeer. Duufaannada boodhka ah ee noocaas ah ayaa hafi kara meeraha oo dhan.
In kasta oo xaqiiqda ah in aan helno meeraha leh jawi dhuuban, haddana way fududahay in la helo xawaare dabayl gaaraya 90 km / saacaddii. Cufnaanta ayaa aad ugu hooseysa Mars oo ay ku kala duwan yihiin cadaadis yar. Wax kale oo loo qabtay abuurista koronto Mars waa dabaysha awooddeeda dhaqaajinta mashiinnada. Awooddaan si weyn ayaa loo yareyn lahaa xitaa iyadoo la qaadanayo xawaaraha duufaanno ciid mar kale sababa cufnaanta hoose.
Ku noolow marsada
Midabka casaanka ee meeraha Mars waxaa ugu wacan joogitaanka birta oksaydhka sida limonite iyo magnetite ee hawada. Tani waxay kadhigeysaa dhexroorka jajabyada xoogaa ka weyn dhererka dhererka iftiinka soo galaya meeraha waxaana lagu arki karaa hawada. Ogsijiin uumiga biyaha ee cimilada wax dhib ah malahan, maaddaama ay jawiga jawigu yahay by 95% ama ka badan kaarboon laba ogsaydh, waxa ku xiga nitrogen iyo argon.
Maqnaanshaha aaladda magnetka ayaa sababa falaadhaha cosmic-ka inay ku dhuftaan Mars, sidaa darteed qurubyada dabaysha qorraxda iyo heerka shucaaca ayaa aad ugu sarreeya aadanaha. Mid waa inuu ku noolaado dhulka hoostiisa.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto dhul-dhigga Mars iyo sifooyinkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Ciencia » Kordhinta
Taariikh nololeedka Leibniz